Andao ary andrevy e! | Mon Gasikara à moi : politique et développement
← Osons l’optimisme
Aleo hiresaka zava-misy fa tsy angano angano →
Andao ary andrevy e!
Publié le 16 juin 2016 par andrianjorar
Pour faciliter la diffusion et la lecture de mes idées vous pouvez trouver ici la version française de cet article.
Misy namana vitsivitsy teo amin’ny facebook nanamarika hoe maninona hono aho tsy mba miresaka zavatra mahafalifaly sy maivamaivana fa manao resaka tsikera sy matotra be foana. Toy ny mahazatra dia valiny mahitsy sy tsotra no homeko anareo eto : efa be dia be ny resaka akelezan-doha eny amin’ireny rohim-bahoaka ireny ka tsy aleo ve mba aleo ny resaka misy dikany sy marim-pototra no ampitomboina isa. Tsy midika akory izany hoe tsy mba manalanala aho na misy fahamarinany ihany aza ilay tsikera raha amin’ny fo tsy miangatra. Koa satria enoko ny feo sy ny fanamarihanareo dia andeha ary isika andrevy, mba hanana vina ny ho avy toy ny nataoko taona vitsivitsy izay mikasika ny fitanterambahoaka.
Taona 2025, satria nisy tanàna ambanivohitra vitsivitsy hono nanome ohatra filamatra mikasika ny fitantanana ny tananany, dia nahazo nindram-bola tany amin’ireo mpamatsy vola avy hatrany ny tanana fa tsy voatery mandalo amin’ny fanjakàna foibe intsony.
Ny tena nampiaky volana ny mpamatsy vola tamin’izany dia sambany mantsy vao nisy tanàna teto Gasikara nahavita ny vitan’ireto tanàna ireto.
Tao anatin’ny 8 taona monja dia nanamboatra sy nikarakara lalana efa mahatratra 280 km ireo tanàna telo ireo. Marina fa lalan-tany izy ireo fa sady malalaka be no tsara karakara ka ahazoana misosasosa tsara tsy misy olana na dia mamovoka aza. Ny tetezana sy ny fiankarana mideza ihany no vita amin’ny rarivato sy béton. Fifanampian’ny orinasan’olon-tsotra sy ny tanàna moa no nahatongavana tamin’izany.
11.800 Ha izao no taningazana voavadik’ireo tanàna ireo ho ala ary tena nampiaky volana ny ONE (Office National pour l’Environnement) mihitsy satria tsy mbola nisy olona na fikambanana, na teto an-toerana, na avy tany ivelany nahavita ny vitan’ireto tanàna ireto. Tsy miaro ala izy ireo fa miaina amin’ny ala ka mitombo hatrany ny ala voleny isan-taona. Raha 20Ha fotsiny ny ala novolen’izy ireo tamin’ny fiantombohany dia efa mahatratra 4.500Ha isan-taona izao ny fambolena ala vaovao ka lasa mihena ny taningazana any amin’ny faritra misy azy ireo. Miroborobo izay tsy izy ny vokatra avy any an’ala toy ny voankazo voahodina, tantely, olatra… ka lasa mirongatra mihitsy ny olona ho any amin’ireo tanàna telo ireo satria tena mbola malalaka ny tany any. Ny fangatahana tany moa dia faran’izay tsotra satria fepetra 2 ihany no angatahina :
– izay mamokatra ihany mahazo mangataka miohatra ny 1.000m², tsy ankijery volonkoditra, na fiaviana ;
– tsy maintsy orinasa vao mahazo mangataka miohatra ny 5Ha ka ny 15% ny orinasa dia an’ny tanàna ary ny rafipitantanana ny orinasa dia tsy maintsy misy mpisolo tena ny mpiasa sy ny tanàna izay miova matetika.
Na dia impolon’ny ahabehan’ny tananan’Antananarivo aza ny fikambanan’ireto tanàna telo ireto dia iray ihany no orinasa lehibe eto : ilay orinasa mpamokatra herin’aratra avy amin’ny masoandro sy ny ria-drano izay manana tanjaka 1GW. Io orinasa io moa dia an’ireo tanàna telo ireo ny 50% ary fikambanana orinasa vahiny sy malagasy tsy miakina ny ambony. Io no mpamokatra herinaratra lehibe indrindra eto Madagasikara ary nahavita nampitsahatra ny fatapahan-jiro eran’ny akamaroan’ny tanan-dehibe teto amin’ny nosy.
Tsy dia misy orinasa lehibe ankoatran’io famokarana herinaratra io moa eto amin’ireo tanàna ireto nefa izy ireo no voalohany amin’ny :
– Famokarana sy fanondranana tantely sy ranom-boakazo tsy mitampoka eran’ny ranomasina indianina atsimo;
– Famokarana hazo fanaovan-trano sy famokarana itony biriky kitay vaovao itony izay faran’izay maharitr’afo.
– Fianarana ambaratonga ambony eran’ny nosy. Maro dia maro tokoa ny mpikarotra eran-tany ara-tsosialy, ara toe-karena sy amin’ny lafiny fitrandrahana ny ala no tonga mampianatra sy indrindra indrindra manao fikarohana aty satria sambany izao eran-tany vao nisy fomba toy izao hoe nisy fandrosoana ka ny olon-tsotra rehetra izay miasa no tena mahazo tombotsoa amin’ny fandrosoana sy ny famokarana.
Somary sadaikatra ihany ny mpitazana vahiny mikasika ny rafitra politika mitantana ireto tanàna ireto nefa moa mihamitombo andro aman’alina ny tanàna manaraka azy ireo eran’ny nosy ary mahomby ny fombany ka tsy hafaky ny hitsikera firy izy ireo.
Tsy misy olona miohatry ny 30 taona ka salama vatana sy saina tsy anasa na tsy mianatra mantsy eto amin’ireto tanàna ireto. Izay tsy anasa dia raisin’ny tanàna antanana ny fanomezana asa azy anatin’ireo orinasa maro andraisany anjara na ny fanampiana azy hanokatra orinasa. Izay tsy manaiky izany dia voaroaka tsy mahazo mipetraka ao anatin’ireo tanàna ireo.
Tsy misy figadràna koa ireo tanàna ireo fa ireo izay voatsara nanao fahadisoana dia tsy maintsy miasa any amin’ny orinasam-pamokarana fa mihena matisasaka ny karamany na mandeha migadra any amin’ny figadràna any amin’ny tanàna hafa. Ireo tena nanao faotana mamoafady toy ny famonoan’olona sy fanolanana zaza moa dia notrotroina ambavaka ary dia nitrangan’ny fahagagàna any ka tsy nisy hita intsony ny nalehany fa asa angamba tonga dia lasa any an-danitra.
Fa ny tena mahakivy ny mpanao politika dia ny tsy fisian’ny antoko politika nahavita nampifidy olona na iray aza tao amin’ireo tanàna ireo na ho ben’ny tanàna izany na ho ao amin’ny antenimiera. Efa ho 500.000 mahery nefa ny mponina ary nametraka lalàna izay tsy misy any amin’ny tany hafa ireo tanàna ireo.
Voalohany : misy foibe fitiliana ny fitantanana ny volam-bahoaka ka izay rehetra te ahafantatra momba ny volan’ny tanàna na ireo orinasa ananany fandraisana anjara, dia mangarahara ny tarehimarika. Misy fitsàrana isaky ny enimbolana io foibe io. Ka izay mpitondra tsy mahatàna ny teny nomeny tonga dia miala ho azy ary tsy maintsy miasa maimaipoana ho an’ny tanàna isaky ny tapakandro, mandritra ny roa taona manatanteraka ny asa mafy indrindra.
Faharoa : voapetraka anaty solosaina daholo ny mikasika ny mponina sy ny fiterahana. Any ka rehefa mifidy dia tsy mila milahatra intsony fa itony finday misaina (smartphone) itony no anaovana ny fifidianana sy ny fanarahamaso rehetra. Marihina fa vao 10 taona ny ankizy dia homena finday misaina maimaimpoana any ampianarana. 5 no isan’ny fifidianana natao nandritra ny 3 toana voalohany fa avy eo dia lasa isaky ny 5 taona toy ny faritra rehetra ihany.
Nanandrana nandà izany rafitra izany moa ny fitondràna foibe tamin’ny voalohany fa nony hitan’izy ireo fa tsy nisy nandraharaha ny baiko avy tany Iavoloha ny olona ary tsy nisy nety niara-niasa tamin’ireo mpisam-panjakàna notendrena dia voatery nanaiky tsy findiny ny atao hoe tena demokrasia ihany ny mpitondra tany Antananarivo.
Tsy angano na arira, fa vina fotsiny.
Galerie | Cet article, publié dans Développement, est tagué Ala fototry ny fampandrosoana, Demokrasia tena izy, Fampandrosoana ifotony. Ajoutez ce permalien à vos favoris.